Ny taona dia fe-potoana na tsingerim-potoana mifandraika amin'ny fitsingerenan'ny fizaran-taona iray ka maharitra manodidina ny 12 tsingerim-bolana. Mifanandrifindrify amin'ny tsingerim-pihodinan'ny Tany amin'ny Masoandro izany.
Araka ny tetiandro ampiasaina dia misy 12 volana amin'ny ankapobeny ny ao anaty taona iray nefa misy tsindraindray taona ahitana 13 volana. Noho ny fahatsapana ny fahataran'ny tetiandro miohatra amin'ny zava-miseho eo amin'ny natiora (fizaran-taona, tsingerim-bolana, fanirin'ny zava-maniry, sns) no antony anampiana volana iray faha-13 ny taona sasany. Izany, ohatra, no mitranga amin'ny tetiandro hebreo izay tsy toy ny tetiandro miozolmana.
Ny ao anatin'ny iray taona, arakaraka ny tetiandro ampiasaina, dia ahitana andro izay matetika miisa mihoatra ny 300 ka ny farany ambony mety hihoatra ny 370 andro. Ny tsy fitovizan'ny iasan'ny andro anatin'ny volana iray arakaraka ny tetiandro arahina no mahatonga izany. Nisy ihany ny taona nahitana andro miisa latsaky ny 300 toy ny tetiandro romana.
Ny taona iray ao amin'ny tetiandro gregoriana, ilay ampiasain'ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao, dia misy 365 andro amin'ny telo taona mifanarakaraka ka misy 28 andro ny volana Febroary, fa 366 andro kosa isaky ny efa-taona izay mampisy 29 andro ny volana Febroary. Izany dia atao mba hahatonga ny efa-taona hisy 1461 andro.
Ny anaran'ny taona iray, amin'ny maha daty azy, dia ny laharany nifanarahana ihany. Ny ankamaroan'ny firenena eto an-tany, izay mampiasa ny tetiandro gregoriana, dia efa samy nanitsaka ny taona faha-2017 tamin'ny taona 2017. Ny tetiandro silamo anefa dia teo amin'ny taona faha-1438 tamin'io taona 2017 gregoriana io. Manampy izany tsy fifanadrifiana izany koa ny tsy fitovizan'ny isan'ny andro ao amin'ny taonan'ny tetiandro tsirairay. Ohatra, ny taona miozolmana iray dia misy 354 na 355 andro nefa ny taona gregoriana misy 365 na 366 andro.